Home Wararka Wafdi Kenyaan ah oo booqday Ciidanka Kenya diidayna in ay la kulmaan...
Wafdi Kenyaan ah oo booqday Ciidanka Kenya diidayna in ay la kulmaan DFS
Waxaa maanta safar aan horay loo shaacin ku tagay degaano ka mida Soomaaliya wafdi ay hogaaminayso Wasiirka Gaashandhiga ee dalka Kenya Amb. Raychelle Omamo oo uu la socdo taliyaha ciidanka dalka Kenya General Samson Mwathethe.
Safarka wafdiga ayaa ujeedadiisu ahayd in ay ugu soo hambalyeeyaan ciidankooda ka howlgala Soomaaliya ciida Kirismaska. Wafdiga ayaa ka biyo diiday in ay qaabilaan ama ay la kulmaan madaxda Dowlada Fedaraalka oo uu ku jjrto wasaaradda Gaashandhiga.
Previous articleMandera: Bamb gacmeed lagu weeraray ciidanka Kenya
Next articleClashes erupt as Sudanese march on presidential palace
Afhayeenka xukuumada xilgaarsiinta oo qarax lala beegsaday iyo khasaare ka dhashay